Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Tuulada Delft ee wadanka South Afrika - Caasimada Online
Home Warar Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Tuulada Delft ee wadanka South Afrika
Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Tuulada Delft ee wadanka South Afrika
Cape Town (Caasimadda Online) – Tuulada Delft ee ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka South Afrika waxaa xalay lagu dilay allaha u naxariistee C/llaahi Maxamed Xuseen oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaalida ee halkaas ka shaqeysta.
Wariye ku sugan Cape Town ayaa noo warramay, wuxuun sheegay in muwaadinka la toogtay isla markaana kooxo aan heybtooda la garaneyn oo madow ah ay ku dhufteen 9 xabadood.
Dableyda dilka geystay goobta ayey ka baxsadeen, Booliska ayaa sheegay iney wadaan baaritaanno arrinkaan la xiriira, waxaana soo badanaya dilalka loo geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsata dalka Koonfur Afrika.
Waxaa la sheegay in Marxuumka maanta lagu aasi doono qabuuraha Muslimiinta ee ku yaalla magaalada Cape Town.
Inta badan dilalka ka dhaca Koonfur Afrika ee loo geysto Soomaalida, ma ahan kuwa lasii hadal qaado, mana jirto cid isku hawsha iney wax ka qabato.